Nhau - Dhijitari Shanduko yeRIU munguva yeCOVID-19
Yenyika 35th yakatarwa ngetani RIU yakavambwa muMallorca nemhuri yeRuu muna 1953 sekambani diki yezororo, nekuvhurwa kwehotera yeguta rekutanga muna 2010, RIU Hotels & Resorts ikozvino ine 93 mahotera munyika 19 dzinogamuchira anopfuura 4,5 mamirioni evashanyi pagore.
Kubva pamazita echinyakare kuenda kuZKONG gore ESLs
Sechikamu chekutyaira kwayo kugadzirisa ruzivo rwevatengi munguva yeCOVID-19, RIU cheni hotera yanga ichitsvaga nzira dzekuvandudza kutaridzika nekunzwa kwemaresitorendi ayo, uye kuve nechokwadi chekugona kupa ruzivo nezve chikafu mumitauro yakawanda asi zvakare kuremekedza yekusiyana kwevanhu. Kunze kweRIU yaida kudzikisa iyo nguva uye mutengo wekuvandudza mamamenyu.
Abensys, mumwe wedu watinotemba naye muSpanish uyo akatanga chirongwa ichi, akati kusangana nehurongwa hweRIU kuburikidza neAPI yeZKONG kwaive nyore. Zvakare ese maZKONG's ESL anomhanya pamwe chete pane akachengeteka, anomhanya uye ipuratifomu imwe chete, iyo inogona kushandiswa pasi rese isina kumisikidzwa, vashandi nevashanyi vanogona kuva nechokwadi chekuti ruzivo rwechikafu runochengetwa rwakarurama mumitauro yakasiyana uye kugadzirisa mune chaiyo-nguva.
· Kumisikidza nekukurumidza uye nyore
· Yakajeka uye inoshamisa kuratidzwa
· Vasingatauri masevhisi
· Kushanda zvisina mapepa
Zvisarudzo zvisina muganho zvemukati dhizaini